mercredi, 21 août 2019 21:58
Ambohitrambo – Arivonimamo: Kara-tany miisa 500 no nozaraina
Milamina ny sain’ny fianakaviana aman-jatony tato amin’ny Kaominina Ambohitrambo, Ditsrikan’Arivonimamo, fa misoratra ara-dalàna amin’izy ireo ankehitriny ny taniny, ary efa eny ampelan-tanan’izy ireo ny porofo manamarina izany dia ny Kara-tany.
Kara-tany miisa 500 no nozaraina ny 13 aogositra 2019, vokatry ny fiaraha-miasan’ny tetikasa ARSF sy ny sampan-draharahan’ny Fanohanana ny Fitantanana ny Fananan-tany itsijaram-pahefana eo anivon’ny Ministeran’ny Fanajariana ny Tany, ny Toeram-ponenana ary ny Asa Vaventy.
Nanentana sy nampirisika ireo izay tsy mbola manana kara-tany Razafindrakotohary Tiana Richard, Talen’ny Fanohanana ny Fitantanana ny Fananan-tany itsijaram-pahefana mba hikarakara izany haingana. Nilaza izy fa kara-tany 2 000 000 isa no hozaraina manerana an’i Madagasikara ary hiezahana ny hametraka Birao Ifoton’ny Fananan-tany amin’ireo Kaominina rehetra manerana ny Nosy.
mercredi, 21 août 2019 21:51
Antsirabe: Tranga famonoan-tena telo tao anatin’ny andro iray
Nisesy ny famonoan-tena teto Antsirabe. Tovovavy roa tokony ho 17 taona, samy avy any Andranomanelatra, ary mbola samy mpianatra avokoa ny tranga voalohany. Nentin'ny havany teny amin'ny hopitaly Andranomadio izy ireo novonjena saingy teny an-dalana dia tsy tana ny ain'ilay tovovavy iray ; avotra soamatsara kosa ilay iray hafa. Nambaran'ny mpitsabo fa poizim-boalavo no narapak’izy ireo.
Tranga faharoa dia lehilahy iray, izay voalaza fa niady saina noho ny fanodinkodinam-bola 30 tapitrisa Ariary tamina banky iray no antony namonoany tena. Soa fa tsy namoy ny ainy izy, saingy mbola manaraka fitsaboana.
Ny andron’ny alatsinainy 19 aogositra 2019 avokoa no niseho ireo tranga famonoan-tena ireo.
mercredi, 21 août 2019 21:26
Tinoka Roberto - Nicolas Dupuis: Nifanakalo hevitra mahakasika ny fanohizana ny fiaraha-miasa
Tonga eto Madagasikara, ary nihaona tamin’ny Minisitry ny tanora sy ny fantanjahantena, Tinoka Roberto tetsy amin'ny minisitera Ambohijatovo i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena amin’ny baolina kitra na Barea. Nifanakalo hevitra mahakasika ny fanohizana ny fiaraha-miasa ny roa tonta, anisan'izany ny fifantenana sy ny fanomanana ny tanora mpandimby, fanomanana ny fifanintsanana amin'ny CAN 2021, ary ny fanarenana ny lesoka tsy nety teo aloha mba hahazoana vokatra tsara mihoatra ny dingana efa vita.
mercredi, 21 août 2019 21:13
Alain Ramaroson: 36 volana sy 17 andro tao Antanimora
Nivoaka ny fonjan’Antanimora ny alatsinainy 20 aogositra 2019 i Alain Ramaroson. Tamin’ny 16 martsa 2019 no efa nahoraka tamin’ny tambazotra serasera sosialy facebook fa nivoaka ny fonja i Alain Ramaroson. Dimy volana aty aoriana vao tena nivoaka ny fonja izy. Niomana ny hamita manontolo ny saziny tao am-ponja i Alain Ramaroson, tsy nitaky ny hamoahana azy, ho ireo akaiky azy.
mercredi, 21 août 2019 20:59
Andriatsima Faneva Imà: Niala tany Frantsa ary milalao any Arabia Saodita indray
Abha Club, io indray no klioba vaovao hilalaovan’i Andriatsima Faneva Imà, kapitenin’ny Barea. Efa ofisialy ny fifindrany any amin’ity klioba mivoatra amin’ny diviziona voalohany any Arabia Saodita, efa vita ny fifanaraham-piaraha-miasa.
Niala tany Frantsa izany i Andriatsima Faneva Imà, firenena nilàny ravinahitra nanomboka tamin’ny 2008, ka nifandimbiasany nilalao tamin’ny klioban’ny FC Nantes, Sochaux ary Clermont Foot 63.
Samy milalao any Arabia Saodita izany izao i Andriatsima Faneva Imà sy Carolus Andrea, ity farany izay milalao ao amin’ny Al-Adalh FC.
mercredi, 21 août 2019 20:22
CCI Ivato: Nifarana ny dinikasa napetraky ny Polisim-pirenena
Nofaranana omaly talata 20 aogositra ny dinikasa ho an'ny fandraisana andraikitra lehibe ho an'ny Polisy nasionaly izay natao teny amin'ny CCI Ivato. Naharitra roa andro izany dinikasa izany.
Tonga namarana izany ny Minisitra ny filaminam –bahoaka Contrôleur Général de Police RAFANOMEZANTSOA Roger.
Nofaranana androany ny taom-pianarana teny amin'ny kolejy CDA Andohatapenaka. Nisy ny lanonana nentina namaranana izany, teo ambany fiahian'ireo mpanabe sy ireo raiamandreny.
Ity kolejy ity moa dia mitaiza sy mampianatra ireo ankizy sahirana, ka ao anatin'izany ny kamboty izay tsy mahefa ny saram-pianarana ka anisan'ny manamora izany ny CDA.
Mpianatra miisa manodidina eo amin'ny 280 eo no mianatra ao ankehitriny.
Ambanja: Miady amin'ny kolikoly ny Polisim-pirenena
Ny 19 agositra 2019 lasa teo taty AMBANJA dia nitsangana ny sampana miady amin’ny kolikoly ao amin’ny CSP AMBANJA taorian’ny fandalovan’ny Bianco Antsiranana nanao fanentanana tao amin’ity sampan-draharaha ity.
Ahitana mpikambana maromaro izany sampana izany, ka ny lehiben’ny CSP AMBANJA no Filoha. Izao fihetsika izao no natao dia satria izy ireo ihany no mahafantatra ny trangana kolikoly miseho ao amin’ny toeram-piasany ka izy ireo ihany no mahafantatra ny vahaolana sy ny fomba iadiana amin’izany kolikoly izany.
Nanome toky hatrany andriamatoa filoha fa hiezaka ny hanova sy hanatsara ny kalitaon’ny asa tanterahan’izy ireo mba ho tombotsoan’ny rehetra .
mercredi, 21 août 2019 12:18
Nosy Be: Nandray ny Fondation ESTHER AJAY avy any Londres ny solotenan'ny Ministeran'ny Mponina
Tonga teto Nosy Be Hell Ville ny solotenan’ny Minisiteran’ny Mponina, ny Fiahiana ara-tSosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, nandray ireo mpiara-miombon’antoka sady mpanao asa soa, Fondation ESTHER AJAY avy any Londres.
Fitaovana sy kojakoja maro no nentin’izy ireo tamin’izany. Lakana sy harato ho an’ny fikambanan’ny mpanjono, machine à coudre sy fitaovana fandrahoana ho an’ny fikambanam-behivavy, Efitrano fianarana roa (2) nohavaozina ho an’ny EPP fianaran’ny ankizy.
Nisaotra sy nankasitraka izao fanolorana izao ny solotenan’ny Minisiteran’ny Mponina sady nisolotena ny fanjakana rahateo. Tsapan’izy ireo fa misitraka ny zony tokoa ny ankizy sy ny vehivavy noho izao fanohanana lehibe izao, ary inoana fa hampivoatra sy hampiroborobo ny fikambanana ny fiaraha-miasa amin’ny tsara sitrapo toy izao.